Nezenhliziyo. inhliziyo esivimba amanzi
inhliziyo esivimba amanzi libhekisela izilonda ze-non-sokuvuvukala imisipha yenhliziyo. Lokhu "ekubhebhetselisa" inqubo kuholela ekusebenzeni kahle we intracellular izakhiwo myofibrils. Kulokhu, kukhona lube buthaka contractility esivimba amanzi. Lokhu ukwehluleka oluthile Ihlobene ngokuseduze ukwephulwa kwamakhemikhali noma physicochemical umzimba walo.
Njengoba umkhuba ubonisa, izimpawu kokunqotshwa zivame zifakwe isivuvo izenzo sifo ecashile. inhliziyo esivimba amanzi kuhambisana ukukhathala, dyspnoea nge umthwalo encane, ukuthulisa ngesikhathi sokudlondlobala inhliziyo ithoni 1st tachycardia ngokulinganisela (ngezikhathi ezithile). Ngokuvamile ephelezelwa kwegazi, systolic hum we Umthambo yamaphaphu kanye tip. Thyrotoxicosis kuhambisana ubuhlungu besifuba, ishayela anda systolic blood pressure, tachycardia (liphinyiselwe), fibrillation atrial. Kungakhathaliseki izimbangela inhliziyo esivimba amanzi kubandakanya ukuthuthukiswa yinhliziyo futhi ukwephulwa isigqi sakhe.
Izimbangela zingase zibe izifo sokuwohloka alimentary, amavithamini, isici ezinobuthi (ubuthi nge barbiturates noma i-carbon monoxide noma utshwala ukudakwa).
Climacteric inhliziyo esivimba amanzi eba abesifazane ngesikhathi nambili kuya kwabadala. Ukuze lesi sifo libhekene ngokucindezela, ezidabukile noma ukugwaza ubuhlungu sokudlondlobala inhliziyo, akuhlobene umthwalo engokoqobo. Izimpawu zingase zibe zimbi ngesikhathi premenstrual futhi ephelezelwa ngamanzi ebusweni, ukushisa komzimba kanye ukujuluka. Ngokuvamile, ubuhlungu ukusakaza kuze kube sohlangothini lwesokhohlo kwesifuba, futhi ngempela isikhathi eside. Kulokhu, nitroglycerin engalethi umphumela. Kwezinye izimo, kwatholakala ukuthi nginesifo ayephuli isigqi inhliziyo. Njengoba ukwelashwa okuphumelelayo ebekiwe hormone ocansini, sedatives ne-beta-blocker ekuhlanganisweni.
Ukusetshenziswa kotshwala isikhathi ngokwanele eside kubangela umonakalo anobuthi abanye imisebenzi intracellular e myofibrils. Lesi sifo kuhambisana palpitations, ukukhwehlela, lokujabulela yokuntuleka emoyeni. Njengoba izimpawu waphawula njengoba fibrillation atrial, amabhithi ngaphambi kwesikhathi noma tachycardia. Inhliziyo ngokuvamile kwandisa ngobukhulu kanye nemisindo yayo bayathuliswa. Lesi sifo kuhambisana izimpawu zokusetshenziswa kabi kotshwala ezingamahlalakhona. Lesi sifo oluphakeme kancane. Ezimweni eziningi, le ukumisa ukuphuza utshwala kuholela ukunyamalala izimpawu.
Uma uqaphela e kusaqalwa palpitation, iphika, ukukhathala, ubuhlungu enhliziyweni sitholakale tireotoksikoznaya esivimba amanzi. Ukwelashwa kuleli cala okuhloswe ngalo ukuqeda i-hyperthyroidism. Qaphela ukuthi thyrotoxicosis liphinyiselwe kakhulu enqanda cupping okwenzeka fibrillation atrial. Kulokhu, ukusebenza kanye nokufaneleka ngokucijile ekunciphiseni noma ekuqedeni i-hyperthyroidism. Ngenxa yalezi zinjongo e ukubonakaliswa ekuseni linqume beta-blocker noma reserpine. Lapho ukubonakaliswa senhliziyo isisu anqunyiwe glycosides inhliziyo.
Ngo umonakalo hypothyroidism ukuze imisipha yenhliziyo kuyinto ongumphelelisi uphethwe eyinhloko. Kulokhu, kukhona Ukwehla e conduction atrioventricular futhi atrioventricular. Ezimweni ezingavamile, arrhythmia kutholwa.
Ngokuvamile, ukwelashwa kuhloswe izinqubo umzimba. Umsebenzi owenziwa ekuphulweni isigqi kanye conduction, kanye yokumelwa yinhliziyo. Iziguli ebekiwe Pananginum, kokarboksilazu, Riboxinum, ATP, i-potassium orotate, inositol. Ngaphezu kwalokho, kuyinto reception ngempumelelo yama-hormone Anabolic (methandrostenolone, Retabolilum), B-amavithamini, beta-adrenablokatorov. Lapho utshwala is contraindicated e izilonda nophuzo oludakayo. Prescribers, ekuthuthukiseni umzimba esivimba amanzi (Ama-anabolic steroid, cocarboxylase, Pananginum, Riboxinum, ATP). Beta-blocker avunyelwe ngemithamo emincane.
Emithambo yegazi disgemiya ingane: izimbangela, izimpawu kanye nezici ukwelashwa
Piospermiya - kuyini? Izimpawu kanye Ukwelashwa
Steatosis Hepatic - satellite ukhuluphele
Yeka ukuthi i-ginger ikhula kanjani. I-ginger ekhula ekhaya
MPM Boomerang 3 * (Bulgaria, Sunny Beach): incazelo ehhotela, imisebenzi, ukubuyekeza zezivakashi
Renault Kangoo - wezimpahla nenhle van
Intaba Shihan e Bashkiria
Soapstone. Izakhiwo kanye Izicelo
Zlotnikov Roman Valerevich: Biography nesithombe
Kuhambisana obonisa izingane
Amahhashi Izidlaliso: uhlu. Izidlaliso amahhashi abadumile